WCPMedia ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအရှိန်မြှင့်တင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » WCPMedia န်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows accelerates
WCPMedia န်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows accelerates
cloud-based ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနခေါင်းဆောင်နေ့စဉ်သတင်းစာများစီမံခန့်ခွဲမှု, transcoding, ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုပူးပေါင်းတိုးတက်လာဖို့ features အသစ်တွေကိုထပ်ပြောသည်။
ဟောလိဝုဒ်-WCPMedia န်ဆောင်မှုများယနေ့, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်သူများပိုကောင်းစတိုးဆိုင်ကိုကူညီစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာတစ်လျှောက်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေဖို့က၎င်း၏စျေးကွက်-ဦးဆောင် cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုကြေငြာလိုက်သည်။ နေ့စဉ်သတင်းစာများစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် transcoding, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအပါအဝင်နယူးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတိုးမြှင့်မှုများလိပ်စာ core ကိုထုတ်လုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုများ Post-ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်များနှင့်အဆုံး-အသုံးပြုသူများ။ WCPMedia ထုတ်လုပ်သူများမိုဃ်းတိမ်၏တနျခိုးအသုံးချခြင်းဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။
"ဒီ WCPMedia ပလက်ဖောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာမှကွက်တိဝင်နှင့်ထိရောက်မှုအသစ်အဆင့်ကိုဆောင်တတ်၏," WCPMedia မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ-အမေရိကတိုက်ဖြစ်သူ Kenneth yas ကပြောပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်များဖြတ်တောက်နှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်အောင်စဉ် "ဒါဟာ, ထုတ်လုပ်သူများလျင်မြန်စွာတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများမီဒီယာမှဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြင့်မားတဲ့ resolution ကို-အပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစသူတို့က, ဖြစ်မီဒီယာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမျှဝေဖို့နဲ့ချောမွေ့စွာပူးပေါင်းဖြစ်ပျက်နေရာတိုင်းမှာ, ပထဝီအတားအဆီးများနှင့်ခွင့်ပြုပါတီများဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ "
လက်ရှိရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထုတ်လုပ်သူများ အဆိုပါလူငယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး¸က Sky, HBO နှင့်တူးမြောင်း Plus အားကနေနေ့စဉ်သတင်းစာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားထုတ်လုပ်မှုအသင်း၏အယ်ဒီတာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့နှင့်အတူဝေမျှဖို့ WCPMedia ပလက်ဖောင်းကိုသုံးအဖြစ်ဒါရိုက်တာသွန်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးတည်းဖြတ်နှင့်ချောဖြစ်စဉ်များဝေမျှ ထို့နောက်စာနယ်ဇင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတူ။
ဒစ္စနေးရဲ့အလုပ်လုပ် DITs Tiny - အယ်လ် Gran Cambio De Violetta အသုံး WCPမီဒီယာ စပိန်နဲ့အင်္ဂလန်အတွက်အယ်ဒီတာများမှတောင်ပိုင်းအီတလီမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်သီပစ်ခတ်မှုတည်နေရာကနေ high-resolution အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပစ္စည်းများရွှေ့ဖို့
ရောမမြို့စက်ရုံဩဂုတ်အရောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုများအတွက်နေ့စဉ်သတင်းစာများကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပလက်ဖောင်းကိုသုံး Black ကလိပ်ပြာဥရောပနှင့်အမေရိကန်အတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှနိမ့် resolution ကိုဗားရှင်း streaming စဉ်စပိန်အတွက်အယ်ဒီတာများမှတစ်ဦး AmbiPicture ထုတ်လုပ်မှု,
သည်အခြားစီမံကိန်းများ, WCP တွေထဲမှာမီဒီယာ လက်ရှိတွင် DIT, အယ်ဒီတာများနှင့်ဒါရိုက်တာကအသုံးပြုလျက်ရှိသည် Wonderwell, ထုတ်လုပ်သူကနေအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင် / သူမ၏နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်အခန်းကဏ္ဍအတွက်နှောင်းပိုင်း Carrie Fisher က featuring ဒါရိုက်တာ Vlad Marsavin, နေ့စဉ်သတင်းစာများဖလှယ်ဖို့, မြင်ကွင်းများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los angle နဲ့ရောမမြို့အကြားကြမ်းတမ်းဖြတ်တောက်မှုစုဝေးရောက်လာကြ၏။
WCPMedia န်ဆောင်မှုများမကြာသေးမီကအာရှနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှဝန်ဆောင်မှုဘဏ်ဍာမှထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Huallywood ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စတူဒီယိုများအတွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုကျောရိုးတည်ဆောက်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။
နယူးနဲ့တိုးမြှင် features တွေပါဝင်သည်:
အလိုအလျောက် Thumbnails: သူတို့အပ်လုဒ်တင်အဖြစ် Key ကို-frame ကိုပုံစံငယ်များအလိုအလျှောက်နေ့စဉ်သတင်းစာများမှလျှောက်ထားနေကြပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်: အခန်းပေါင်းများနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြ, content တွေကိုဝေမျှသူကိုအခြားသူများနှင့်တိုက်ရိုက်အာမခံပစ္စည်း communicate ။
တိုးတက် Filter ကိုနဲ့ Search: အသုံးပြုသူ-defined tags များကနေတစ်ဆင့် filter နဲ့ search အကြောင်းအရာ (ဥပမာခေါင်းစဉ်, ဇာတ်လမ်းတွဲ, အမျိုးအစား, အမျိုးအစား) ။
အကြောင်းအရာ Views: (လယ်ပြင်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေ) တစ်ဦးအပြားစာရင်းတစ်ခုခုအဖြစ်သို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်ကြည့်ရန်အကြောင်းအရာ။
်ကမ်းတက်စာမျက်နှာ: ဒီဇိုင်း user interface ကိုလွယ်ကူစွာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းများကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်စေသည်။
HTML5 များအတွက်ပံ့ပိုးမှု: နယူး HTML5 streaming များ player ကို variable ကိုပြန်ဖွင့်အမြန်နှုန်း, ထပ်, sequential ကစားနှင့်အခြား features တွေပါဝင်သည်။
အခန်းပြပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: ထုံးစံ catalog များကစစ်ဆေးခြင်းအခန်းများကိုဖန်တီးပါ။ selection အထိခိုက်မခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကျော်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်အကြောင်းအရာသည်။
အကြောင်းအရာ Hierarchy: အားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစည်းရုံးရေးများအတွက်အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း ဖန်တီး. သတ်မှတ် "နေ့", "စသည်တို့" ယူ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ 2011 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကမ္ဘာ့ဖလားအကြောင်းအရာဝင်ရိုးစွန်းလုပ် SA (aka WCPMedia န်ဆောင်မှုများ) ဥရောပအခြေစိုက်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေရေး software နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကုမ္ပဏီ USA နဲ့ကနေဒါ, စျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အလွယ်တကူနဲ့လုံလုံခြုံခြုံအလျင်အမြန်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေကြောင်း, (ဆွစ်ဇာလန်) ဖြစ်ပါတယ်။ WCPMedia န်ဆောင်မှုများသက်သေပြခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး Top-ဆင့်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲပေါင်းစပ်ကြောင်းစမတ်ဖြစ်စဉ်ကို applications များတဲ့ပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.wcpmediaservices.com
ယူအက်စ်အေရုံး: 7083 ဟောလိဝုဒ် Blvd. ဟောလိဝုဒ် , CA 90028
ကနေဒါရုံး: 390 ဂလားပင်လယ်အော်လမ်း, Suite 1706, တိုရွန်တို M5H 2Y2
ဥရောပရုံး: မှတစ်ဆင့် Zurigo 35, 6900 Lugano, ဆွစ်ဇာလန်
Goldcrest Post သည် Indie Thriller ၏အသံနှင့်ရုပ်ပုံကို“ သူမသေသည်” - သြဂုတ်လ 3, 2020
Stephen Arnold ဂီတနှင့် TradeCafe ™သည် Sonic အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည် - သြဂုတ်လ 3, 2020
STORY'S Ron Lazzeretti Bud Light ကိုကူညီသည်၊ FCB သည် Ballpark ကိုဆင်ခြေဖုံးများသို့ယူဆောင်လာသည် - ဇူလိုင်လ 28, 2020
မိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုများ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ WCPMedia လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2017-02-28
ယခင်: အဝိုင်းတွင် Entertainment ကပစအဖွဲ့သို့ Craig စျေးထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: ဂိမ်း Developers Conference 2017 မှာကွမ်တမ်